Imidlalo ye-AppImage: Ungayitholaphi imidlalo eminingi ye-AppImage? | Kusuka kuLinux
Imidlalo ye-AppImage: Ungayitholaphi imidlalo eminingi ye-AppImage?
Ukufaka kwe-Linux Post | 16/06/2021 06:00 | Aplicaciones, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Njengoba sibonile, ekungeneni kwethu kwangaphambilini kubizwe "I-Counter Strike 1.6: Indlela enhle yokudlala le FPS ku-GNU / Linux!", faka uhlelo lomsebenzi noma lomdlalo ngefomethi ".AppImage" imvamisa kuyisikhathi se- enye indlela (isixazululo) ilusizo kakhulu futhi iyasebenziseka kunezinye, lapho ingafakwanga ngokwakhona ezinqolobaneni zethu I-GNU / Linux Distros.
Ngakho-ke, ekungeneni okushiwo kuphawulwe ukuthi, ifayela litholakele lasetshenziswa ku- Ifomethi ye -AppImage " kusuka a Isiteshi seTelegram. Futhi yize, Iziteshi zeTelegram namaqembu Imvamisa zinhle kakhulu ekulungiseni amafayili wohlelo lokusebenza namageyimu, into enhle kakhulu kuze kube manje ukwazi ukwazi ukuthi yimaphi amawebhusayithi akhona asebenza ngokufana, okungukuthi, aqukethe ubumnandi futhi athakazelisayo Amageyimu kufomethi ye-. .AppImage ».
I-Counter Strike 1.6: Indlela engcono kakhulu yokudlala le FPS ku-GNU / Linux!
Okwalabo abanesifiso sokuhlola kusho ukuphawula okushicilelwe "I-Counter Strike 1.6: Indlela enhle yokudlala le FPS ku-GNU / Linux!" Ungakuhlola lokhu nokunye okuhlobene, usebenzisa izixhumanisi ezingezansi:
"Impela, "I-Counter Strike 1.6" Ayikhululekile futhi ayivuleki, kepha uma kukhulunywa ngokudlala nabangane banamuhla, futhi ikakhulukazi labo bangesikhathi esidlule, singakwazi ukungakunaki, umzuzwana wokwabelana okunempilo, singasebenzisi Umdlalo okhululekile novulekile, yize kuningi kuhle kakhulu ukuthi kukhona, njengoba sesivele satshela kwezinye izincwadi ezedlule ezihlobene."
I-XtraDeb: Indawo enhle kakhulu ye-PPA yezinhlelo zokusebenza nemidlalo ye-Ubuntu
ULutris: Iklayenti lomdlalo elivuselelwe futhi elihle kakhulu le-GNU / Linux
I-Itch.io: Imakethe evulekile yemidlalo yevidiyo ngokusekelwa kwe-GNU / Linux
I-GameHub: Umtapo wolwazi onobunye wayo yonke imidlalo yethu
1 Imidlalo ye-AppImage: Amawebhusayithi wokulanda amafayili we-AppImage
1.1 Yimaphi amawebhusayithi wamafayela we -AppImage akhona njengamanje?
1.1.3 I-Linux Games Portal
1.1.4 Linux-Apps.com (Imidlalo AppImage)
Imidlalo ye-AppImage: Amawebhusayithi wokulanda amafayili we-AppImage
Yimaphi amawebhusayithi wamafayela we -AppImage akhona njengamanje?
Ngemuva kwalokho sizomemezela 4 amawebhusayithi athakazelisayo, awusizo futhi asebenzisekayo lapho noma ngubani angafinyelela kalula ukusesha, ukulanda nokufaka noma yiluphi uhlobo lohlelo, futhi ikakhulukazi imidlalo, ku ifomethi «.Ifomethi ye -AppImage»:
Le webhusayithi iqukethe ikhathalogi yezinhlelo ezingaphezu kwezingu-100 kufomethi ye -AppImage, futhi iyaqhubeka nokukhula. Izinhlelo ze-AppImages yizinhlelo zokusebenza ezizimele ezingalandwa kalula futhi zisebenze kunoma yikuphi ukusatshalaliswa kwe-Linux. Ukuhlanganiswa okungcono futhi okulula, kungalandwa futhi kusetshenziswe AppImageLauncher.
Le webhusayithi ngobuchwepheshe yi-App Store yeNhlangano edale iphakethe le-AppImage, okungukuthi, AppImage.org.
I-Linux Games Portal
Le webhusayithi ifaka futhi isabalalisa imidlalo emikhulu yeLinux njengamaphakheji aphathekayo, aqukethe okungasebenza (noma kufanele) asebenze kunoma yiluphi uhlelo lweLinux. Isebenzisa ifomethi yephakheji ye-AppImage, nomlingo othile wokubhala.
Linux-Apps.com (Imidlalo AppImage)
Le webhusayithi inesigaba se- Imidlalo, ngezindlela eziningi kufaka phakathi I-AppImage. Okusho ukuthi, inesibopho sokupakisha nokusabalalisa izinhlelo zokusebenza nemidlalo emikhulu yeLinux efana amaphakheji aphathekayo futhi azimele lokho kungasebenza (noma kufanele) kusebenze kunoma yiluphi uhlelo lwe-Linux. Isebenzisa ifomethi yephakheji ye-AppImage, nomlingo othile wokubhala.
Ngaphezu kwalokho, kuyingxenye yomunye omkhulu futhi owaziwa kangcono obizwa ngokuthi Ukubeka, nakho okuyingxenye ye- Opendesktop.org. I-Pling yisigaba seSitolo, lapho abadali bengashicilela khona imikhiqizo yabo nokuqukethwe kwamahhala futhi bathole isinxephezelo esincane isikhathi ngasinye lapho kulandwa umkhiqizo noma okubonwayo, kukhawulwa kunani leminikelo etholakala esigabeni ngasinye.
Uma omunye umuntu azi omunye iwebhusayithi ethokozisayo, ewusizo futhi ephathekayo ngenhloso efanayo noma ukusebenza, sishiya igama laso, kumazwana alo shicilelo.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" Mayelana nani amawebhusayithi zikhona ukusesha nokulanda Amageyimu ku- «formato .AppImage», ngakho faka futhi udlale kalula lezo esizithandayo nesizikhonzayo; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Imidlalo ye-AppImage: Ungayitholaphi imidlalo eminingi ye-AppImage?
UTim Berners-Lee uthengisa ikhodi yangempela yomthombo www